Balakoonka Shiinaha ee Balkiga Dabaqaynta Nidaamka Kinzon06 iyo alaab-qeybiyeyaasha | Kinzon
Nidaamka dhalaalaha ee loo yaqaan 'balcony balcony balcony siscon' wuxuu ka horjoogsadaa roobka, barafka, dabaysha, boodhka, iyo shimbiraha inay ka fogaadaan balakoonkaaga iyadoo aan yareynin qaddarka iftiinka ee aad hesho. Nidaamka dhalaalaya ee balkoni ee Kinzon06 wuxuu ka dhigan yahay waqti yar iyo lacag lagu kharash gareeyay dayactirka iyo hagaajinta sagxadaha gudaha iyo dhismayaasha. Daraasado badan oo ku saabsan nidaamka balkoniinka balkoni ee Kinzon06 waxay muujinayaan in abuurista solarium-ka ay si guud u yaraynayso isticmaalka tamartaada. Nidaamka dhalaalaha ee loo yaqaan 'balcony balcony balcony siscon' wuxuu yareyn karaa heerarka dhawaqa 50%, marka waxaad ku nasan kartaa gudaha gurigaaga oo aad si raaxo leh u seexan kartaa.
Nidaamka glacony glazing system-Kinzon06
Weligaa ma heli kartaa meel aad u badan? Nidaamka dhalaalaya ee loo yaqaan 'balcony balcony balcony siscon' wuxuu siinayaa adiga iyo qoyskaaga qol dheeraad ah oo aad ugu adeegsan karto waxkastoo aad jeceshahay. Laakiin tan kaliya maahan, nidaamka balcony balcony balcony balcony wuxuu sifiican uga shaqeyn karaa dhammaan noocyada dhismayaasha. Nidaamka dhalaalaha ee loo yaqaan 'balcony balcony balcony system' wuxuu noqdaa maalgalin gacan ka geysata kor u qaadida dabeecadda dhismaha, iyadoo deegaanka ka dhigaysa mid deggan mid nabadgelyo leh oo soo jiidasho leh.
F70300 ee balinky balcony system gla glay waa guur-guur, adeegsiga wareegga gu'ga ee dhaqdhaqaaqa wuxuu xakameyn karaa farqiga u dhexeeya galaaska galaaska; F70400 isticmaalku waa mid is-beddel leh, iyadoo la adeegsanayo qaab-dhismeedka 'eccentric qaab-dhismeedka' si loo hagaajiyo kala-baxa ka hor iyo ka dib inta u dhexeysa mashiinka muraayadda.
Nidaamka dhaqaalaha Nidaamka gla glay system-Kinzon waxaa loo adeegsaday nooc kasta oo ka mid ah qaabka balakoonka
Qiimo jaban Qiimaha ayaa hooseeya, laakiin tayada ayaa wanaagsan.
Gawaarida POM Nidaamka glacony-glazing system-Kinzon wuxuu isticmaalaa wheel wheel POM iyo degenaansho deggan
Xirmooyinka faleebo U isticmaal SS304 faallooyinka dhuumaaleysi si ay u istaagaan culeys weyn, iska ilaali dhalooyinka muraayadaha.
Guddiyada dhalada Ballaca ugu sareeya ee looxyada muraayadda waa 700mm oo sarajooggeeduna yahay 2200mm.
Isku-hagaajin fudud U adeegsiga qaabdhismeedka qaabdhismeedka eccentric-ga si loogu hagaajiyo kala-baxa ka hor iyo ka dib inta u dhexeysa gudiga galaaska
Bixiso insides aan muuqan Codso astaanta muuqaalka muraayadaha gaarka ah iyo feedhka ayaa ah insulin muuqata
Qalabka isku xirka Adeegso SS304 si aad ugu xerdid astaamaha tareenka si aad u hubiso xasilloonida isku xirnaanta
Maaddada astaanta Aluminium aluminium alwaax 6063T5 ah oo loogu talo galay astaamaha, dusha sare waxaa lagu daaweeyaa buufis elektiroonig ah oo taagan
Hore: Balakoonka daaqada Kinzon50
Xiga: Glass laablaabka albaabka Kinzon35